Ndakasvira Getty wemazigaro nemazizamu paParty! – Makuhwa.co.zw
Ndakasvira Getty wemazigaro nemazizamu paParty!
Getty invited me to this party at her house but I think aida kuti tisviranae.I offered to help in the kitchen so that ndimudhume mazigaro nemazizamu ndobva ndati imistake. Handina kuita disappoint ndakumusvirwa for days.
Getty ndi single mother anotoshanda day and night kuti zvinhu zvake zvimuitire and anoda kupota achimbosvirwa kuti stress iite shoma. Ndakatanga kusuka maplates hangu, paakauya to get water ndakabva ndaita brush ruoko rwangu pazamu ndikabva ndati sorry, ndakangonzwa kuti aaaahhh iwe mhani urikuitei? Ndikati aaaahh aaahh ndikaseka hangu, ndakaona munhu achisekerera ndikati nechemumoyo ” uri kutondisekerera manje uchasvirwa nhasi.!Wati wadii?
After vanhu vese vaenda mwana wake aenda kunorara, ndakatanga kungomukisa ndikabva ndaisa zvigunwe two mubeche ko ndainge ndisina nguva yekutambisa. My other hand was busy richitambisa minyatso yainge yamira kunge kamhandara kasati kambobatwa mazamu, kana kuti akamboyamwisa panguva iyoyo wairamba. Ndakamuudza kuti I love you munongoziva kutaura kwekuda kusvira ndichimunyepera …yes ndainyepa!
Ndakaenda naye kubedroom ndikamurarisa nedumbu mhata dzese kumashure kwandiri uko,
ndakatanga kubata bata makumbo ake ndichimukisa ndichikwira nemuzvidya.I kissed beche rake ndikaridya kunge dessert I have to say beche rake was big zvekungomisa mboro rega.
Related Topics:Ndakasvira Getty wemazigaro
Ndakasvira Mpumi mupark, aiyita kunge ane mapeche two akasiyana!
Ndakasvirwa nehusband ye business partner yangu – Beche rakakweshwa ipapo!